Lozam-pifamoivoizana – RN 1: tsy avotra, maty kilan’ny afo ilay lehilahy mpitondra moto | NewsMada
Voadona mafy ny lohany taorian’ny fianjerany. May vokatry ny firehetan’ilay moto scooter nentiny ny vatany manontolo. Nitarika ny fahafatesan’ity lehilahy iray, niharan-doza tao Andranomadio, Tsiroanomandidy, afakomaly, ity, ireo.
Nitrangana lozam-pifamoivoizana iray tao Andranomadio Tsiroamandidy, ny alakamisy teo, tokony ho tamin’ny 3 ora tolakandro. Maty tsy tra-drao ny lehilahy iray sahabo ho 40 taona. Nitondra moto scooter ity farany ka tra-doza teo alohan’ny fidirana fiolahan-dalana iray. « Niakapoka mafy tamin’ny arabe ny lohany ka fanina tsy nahatsiaro tena izy. Nirehitra ilay moto scooter nentiny ka tratran’ny fahamaizana vokatr’izany ny vatany manontolo”, araka ny fitantaran’ny loharanom-baovao iray. Niezaka namonjy azy ihany ireo sendra nahita ity loza ity, saingy tsy avotra ny ain’ilay raim-pianakaviana voalaza fa miasa ao Ankadinondry Sakay.
Ankoatra izay, lehilahy iray 29 taona naratra mafy, afakomaly hariva tokony ho tamin’ny 7 ora sy 20 minitra, tetsy Manjaka, kaominina Ankadikely Ilafy.
Nanao taingin-droa tamina moto scooter niaraka amina vehivavy iray izy. « Nisongona kamiaobe iray izy ireo, niray zotra nihazo an’i Sabotsy Namehana », hoy ny fanazavan’ny zandary ao Ankadikely, misahana ny famotorana. Araka ny fanambarana, nifanena tamina fiara hafa anefa ireo mpitaingina moto raha izy ireo nisongona ilay kamiao iny indrindra. « Voasaringotr’ilay kamiao, noho izany, ilay vehivay taoriana ka nianjera. Tsy naratra ity farany raha voa mafy kosa ilay nitondra», hoy hatrany ny zandary. Taorian’izay, nentina haingana teny amin’ny HJRA ilay niharam-boina. Raha ny fantatra, mponina eny amin’ny kaominina Ankadikely Ilafy izy roa ireto. Ilay mpamily ny kamiao kosa, tazomina ao amin’ny tobin’ny zandarimaria ao an-toerana. Misokatra ny fanadihadiana.
Vehivavy bevohoka voadona
Sendra ny lozam-pifamoivoizana ihany koa ny vehivavy iray mitondra vohoka, omaly hariva teny Ambodihady. « Nandeha mafy ilay fiaram-panjakana, niverin-dalana tampoka anefa ilay fiara », hoy ny nambaran’ny loharanom-baovao iray. Voadona tamin’izany ilay vehivavy nentina moto BWS. Vokany, nianjera ilay renim-pianakaviana ka tsy nahatsiaro tena taorian’ny loza. Nentina teny amin’ny hopitaly avy hatranny ireo naratra taorin’izay.